हरेक १० जना मध्ये १ जनामा पित्तथैलीको पत्थरी हुन्छ - प्रश्नोत्तर - प्रकाशितः कार्तिक २६, २०७४ - नारी
हरेक १० जना मध्ये १ जनामा पित्तथैलीको पत्थरी हुन्छ
डा. राकेशकुमार शाह
हामीले खाएको खाना पच्ने प्रक्रियामा पित्तको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कलेजोमा बनेर पित्तनली हुँदै आन्द्रामा मिसिने पित्तमा भएका विभिन्न प्रकारका नुनहरू हुन्छन् जुन जम्नसक्छन् र पत्थरी बन्छन् । यी पत्थरहरू पित्तथैलीमा हुनसक्छन् जसलाई पित्तथैलीको पत्थरी भनिन्छ । हामीमध्ये करिब १० प्रतिशत मानिसमा पित्तथैलीको पत्थरी देखिन्छ । दस जनामध्ये १ जनामा हुने यो रोगको उपचारका लागि गरिने अप्रेसन संसारभरमा सबैभन्दा धेरै गरिने पेटको अप्रेसनमध्ये एक हो ।
यसको एकमात्र उपचार अप्रेसन गरेर पित्तथैली निकाल्नु नै हो । अहिले यो अप्रेसन दूरबिन प्रविधिबाट गरिन्छ । प्रविधिको विकासका कारण उपचार निकै सहज भएको छ । अप्रेसन गरेको २४ घन्टामै बिरामी घर जान सक्छन् ।
- डा. राकेशकुमार शाह
ग्यास्ट्रोसर्जन, ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल
- संसारमा सबैभन्दा धेरै गरिने पेटको अप्रेसनमध्ये पित्तथैलीको पत्थरी झिक्न गरिने अप्रेसन पहिलो नम्बरमा आउँछ ।
- दूरबिन प्रविधिबाट अप्रेसन गर्दा बिरामीलाई कम पीडा हुन्छ भने घाउ संक्रमण हुने तथा पाक्ने समस्या पनि न्यून हुन्छ ।
- पीडा कम हुनाले अप्रेसन गरेको ४ देखि ६ घन्टामा बिरामी हिँडडुल गर्न थाल्छन् । सामान्य मानिससरह खानेकुरा खान सकिन्छ । अप्रेसन गरेको ४८ देखि ७२ घन्टामा बिरामी सामान्य कामकाज गर्न सक्ने हुन्छन् ।
- पत्थरीको उपचार गर्न औषधि होइन शल्यक्रिया नै आवश्यक हुन्छ ।
- सानो पत्थरी हुँदैमा कम असर पर्छ भन्ने हुँदैन । पित्तथैलीको पत्थरी निकालेपछि कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन ।
माघ २६, २०७३ - महिनावारी किन र कसरी हुन्छ ?
माघ २३, २०७३ - पित्तथैलीको पत्थरीबाट जोगिने उपाय
माघ २१, २०७३ - महिनावारी किन गडबड हुन्छ ?
पुस २८, २०७३ - शरीर तातो हुने, टाउको दुख्ने, पेटमा अप्ठ्यारो महसुस र झमझम किन हुन्छ ?